Wixii xunba ma madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Kheyre baa leh? - Caasimada Online
Home Maqaalo Wixii xunba ma madaxweyne Farmaajo iyo ra’iisul wasaare Kheyre baa leh?
Wixii xunba ma madaxweyne Farmaajo iyo ra’iisul wasaare Kheyre baa leh?
Dhanka kale, dheeshan marna Hawiye jeeb lagala soobaxayo, markii ladoonana isla jeebkii Hiraab lagala soobaxayo, iyadoo beel gaar ah loola danleeyahay, oo lagu faquuqayo, horaa loogu daalay. Allaha unaxariistee Marxuum Faarax Gololleey, oo ahaa mas’uul Soomaali oodhami xikmad kutaqaana, ayaa ciyaartan Hiraab mararka qaar jeebka kalasoo bixista ah hore usheegay, ereyaduu isticmaaley, oo dadka Koonfureed intooda badani wada yaqaanaanse, sooqori maayo, balse dadoow Hiraabnimada meel aaneey shuqul kulaheyn yaan lagu camcaminin.
Waxaa intaa kasii xanuun badan. Dadkii Marxuum Cabbas uu kadhintay ayaa waxaa sanka laga galinayaa “Kas ayuu kudhintaye, war Diyo maqaadaneeysaan mise maya!!!”. Maxeeyba wax cafiyaan ama Diyo qaataan, mar hadii sidaaba hadalku yahay, iyadoo guddoonka maxkamada sare sidaa wax ufaahfaahiyey. Xaalku soow ma aha Gacan-kudhiigle Ceeydiid, waa Laandheere, oo beel weyn buu kadhashay, sidaa daraadeed cid taabankartaahi majirto, xitaa haduu wasiir dowlada katirsan kas cad udilay, isagoo rajo kaqaba in uu kubadbaadi doono. Dowladnimoow xaal qaato.